boaty fitahirizana Factory | Boaty fitahirizana sinoa mpanamboatra, mpamatsy
Boaty fitehirizana 4 (S) LJ-1662
Boaty fitahirizana LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Miaraka amin'ny sosona 4 sy ny famolavolana vatasarihana, ity fitahirizana misaraka ity dia ho tsara kokoa, tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro.
Boaty fitehirizana 4 (M) LJ-1663
Boaty fitehirizana 4 (L) LJ-1665
Boaty fitehirizana 4 (XL) LJ-1666
Boaty fisorohana azo aforitra 58L LJ-1998
LONGSTAR boaty fisarihana azo aforitra LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Miaraka amin'ny famolavolana kodiarana dia mety aminao tokoa izany! Raha mila afindra izy, tsy mila tazomina, alao fotsiny fa tsy maninona; Miaraka amin'ny famolavolana tsorakazo dia mety tokoa izy io; Ny tena zava-dehibe dia ny azo aforitra, rehefa tsy ampiasaina, aforeto fotsiny izy dia ok, mamonjy habaka betsaka; Tena ilaina amin'ny fiantsenana, fitondrana entana, koa mety hipetraka eo amboniny, tena ilaina izy io ary mety amin'ny fiainantsika andavanandro.
Boaty fitahirizana toradroa misy sarony LJ-1615
Boaty fitahirizana LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Afaka mitahiry tsara, mandà tsy hikorontana; Miaraka amin'ny famolavolana fonosana, hisoroka ny loto; Amin'ity harona fitahirizana minimalista sy kanto ity dia ho tsara tarehy sy madio kokoa ny trano.
Boaty fitehirizana azo zahana 40L LJ-1997
Boaty fitehirizana LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Afaka mitahiry tsara, mandà tsy hikorontana; Miaraka amin'ny famolavolana fonosana, hisoroka ny loto; Miaraka amin'ny famolavolana tantanana, mora entina ho anao izy! Ny tena zava-dehibe dia ny azo aforitra, rehefa tsy ampiasaina, aforeto fotsiny izy dia ok, mamonjy habaka betsaka; Amin'ny alàlan'ny faritra malama dia mora ny manadio azy, ary mahazo aina ihany koa.
Boaty fitehirizana (L) LJ-1603
Boaty fitahirizana LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Afaka mitahiry tsara, mandà tsy hikorontana; Miaraka amin'ny famolavolana fonosana, hisoroka ny loto; Miaraka amin'ny fahaiza-manao avo dia tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro.
Boaty fitehirizana (M) LJ-1605
Boaty fitehirizana (S) LJ-1606
Boaty fitehirizana birao LJ-1618
Boaty fitahirizana birao LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Afaka nitahiry tsara, nandà ny birao ho mikorontana; Amin'ity boaty fitahirizana minimalista sy kanto ity dia mety ho madio sy madio kokoa.
Boaty fitehirizana 4 (MS) LJ-1661